१० चैत्र २०७२, बुधबार १५:४६	0 800
सूर्य भन्दा पृथ्वी कयौ माइल टाढा छ तर पनि अलिकति गर्मी बढ्ने बितिक्कै हामीलाई उकुसमुकुस हुन्छ । तर अहिलेको प्राकृतिक सूर्य भन्दा पनि तीन गुणा तातो सूर्य बनेको छ । अब सोचौ, यसको तापक्रम कति होला ? अनि यो बिष्फोट भए नेपाल, भारत लगायत छिमेकी मुलुकको हालत के होला ? चीनको हेफेई शहरमा अवस्थित ‘इन्स्टिच्यूट अफ फिजिकल साइन्स’मा भएको यस खोजको परीक्षणमा ‘एक्स्पेरिमेन्टल एडभान्स्ड सुपरकन्डक्टिङ् टोकामाक’ (Experimental Advanced Superconducting Tokamak- EAST) नामक मेसिनको प्रयोग गरिएको थियो। यस मेसिनले हाइड्रोजनलाई ५ करोड केल्भिनसम्म तताउन सफल भएको हो, जुन सूर्यको सतहभन्दा ३ गुणा तातो हो। (सूर्यको सतहको तापक्रम करीब १ करोड ५० लाख केल्भिन रहेको हुन्छ)। बैज्ञानिकहरु कृत्रिम सूर्य निर्माण गर्न सफल भएका हुन् । ग्यासको तुलनामा न्यूक्लियर इनर्जी बढी महत्वपूर्ण र प्रभावकारी हुने हुँदा कृत्रिम सूर्य निर्माण गर्न सफल हुनुले सूर्यबाट प्राप्त इन्धनमाथिको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न सकिने चिनियाँ बैज्ञानिकहरुले विश्वास लिएका छन् । चीनको यो नयाँ प्रयोगमा भने वैज्ञानिकहरुले ५ करोड डिग्री केल्भिन तापक्रमलाई १०२ सेकेण्डसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन्। अंग्रेजी अखबार मिररको अनलाइन संस्करणका अनुसार चीनका वैज्ञानिकहरुले ५ करोड डिग्री सेल्सियस तापमानलाई त्यो समयसम्म कायम राख्न सफल भए जुन समयसम्म न्युक्लियर फ्युजन च्याम्बरको कोर यो तापमानमा पग्लेर नष्ट हुँदैन । वैज्ञानिकहरुका अनुसार अब सूर्यसहितको इन्धनमा हाम्रो निर्भरता समाप्त हुन सक्नेछ किन कि ग्यासमार्फत पैदा हुने न्युक्लियर इनर्जीलाई धेरै मात्रामा प्रयोग गर्न लायक इन्धनमा बदल्न सकिनेछ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको यो आविष्कार त्यो प्रोजेक्टको हिस्सा हो जसबाट न्युक्लियर फ्युजन रियक्टरमार्फत प्रयोग गर्न लायक इन्धन बनाउन सकियोस् । चीनको यो आविष्कारसंगै बिश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु तिनछक परेका छन् । स्मरण रहोस बिश्वका अमेरिका, जापान लगायत मुलुकहरु ब्यबसायिक र आविस्कारका दृष्टिकोणले चीनका प्रतिष्पर्धी हुन् । शत्रुताको दृष्टिकोणले कुकुर- बिरालो जस्तै सम्बन्ध भएको भारतलाई त चीनको यो आविष्कार बज्रपात नै भएको छ । हेर्नुस फोटोफिचर यो पढ्न छुट्यो कि ? भारतले बंगलादेशलाई उडाएको भिडियो भाइरल (हेर्नुस भिडियो)
१० चैत्र २०७२, बुधबार १४:४८	0 500
बिश्वकप टि २० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज दुई एसियाली टोली भारत र बंगलादेशको खेल हुदै छ । सेमीफाइनलमा प्रवेश गर्नको लागि भारतलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाब छ । भारतले आफ्नो खेलमा न्युजिल्याण्डसँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा पाकिस्तानलाई पराजित गरेको थियो । यस समुहबाट न्युजिल्याण्ड सेमीफाइनलको लागि छनौट भई सकेको छ भने अर्को एउटा स्थानको लागि भारत, अस्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा छ । यी तिन टोली कै समान २-२ अंक छ । आजको खेल जिते भारतको अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना बलियो हुनेछ । बंगलादेश भने हालसम्म अंकबिहिन छ । यसैबीच आजको खेल बंगलादेशको मजाक बनाईएको एउटा भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल बनेको छ । यसलाई भारतीय समर्थकहरुले बंगलादेशले धोनीको टाउको काटेर बनाएको भिडियो बदलाको रुपमा समेत हेरेका छन् । यता आजको यस खेलमा बलिउडका चर्चित अभिनेता शाहरुख खानले कमेन्ट्री गर्ने भएका छन् । कमेन्ट्री बक्समा कपिल देव, शोएब अक्तरसँगै खान पनि देखिने भएका हुन् । खानले मुम्बईमा रहेको स्टुडियोबाट कमेन्ट्री गर्ने भारतीय संचार माध्यममले जनाएका छन् । खेल नेपाली समय अनुसार ७:४५ बजे सुरु हुनेछ । यस अघि ३:४५ मा इंगलैंड र अफगानिस्तानबीचको खेल हुनेछ । हेर्नुस भिडियो यो पढ्न छुट्यो कि ? संगत गर्न नहुने ८ प्रकारका मानिस भारतीय रुपैया अब अनलाइनबाटै डाउनलोड !
९ चैत्र २०७२, मंगलवार १७:३२	0 320
रमाइलो र उमंगको पर्व होली आज राजधानीसहित पहाडी जिल्लाहरुमा धुमधामका साथ मनाइदै छ । तराइका जिल्लाहरुमा भने भोलि मनाउने चलन छ । होलीका अबसरमा आज बिभिन्न क्लव तथा पार्टीहरुमा युवायुवतीहरु जमघट भएर रमाईरहेका छन् । यसपटक विगत वर्षको तुलनामा अनुशासित देखिएको होली आफ्ना परिचितबीचमा मात्रै खेल्ने दृश्य बढी देखिएको छ । उपत्यकाका महत्वपूर्ण चोकमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँच कडा पारेको छ भने हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई निगरानी गरेको देखिन्छ । यस वर्ष होलीको उत्साह विगत वर्षको तुलनामा केही कमी आएको देखिएको छ । युवापुस्ताले केही रमाइलो गरेको देखिए तापनि आमजनतामा रौनकता छैन । उपत्यकामा सवारीसाधनको उपस्थिति पातलो छ । सवारीसाधनको संख्या निकै पातलो छ । होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूणिर्मा अर्थात होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ । होली खेल्ने दिन भन्दा एक दिन पहिला राती होलीका दहन गरिन्छ । राती होलीका दहन गरिसके पछि बिहान पानीमा रङ्ग घोलेर एक अर्कामाथि फाल्ने चलन छ । सानो सानो नानीहरूदेखि वृद्ध वृद्धा सम्म सबै होलीको मजा गर्छन् ।
८ चैत्र २०७२, सोमबार १६:३५	0 2,956
रंगहरुको पर्व होली मंगलबार धुमधामका साथ मनाईदै छ । बिभिन्न संघ संस्था र क्लबहरुमा आजै होली मनाइसकेका छन् । बाटोमा लोला हान्नेहरुलाई त एक हप्ता अघि देखि नै होली लागेको थियो । होली रमाइलोको पर्व मात्रै होइन यसका केही धार्मिक मान्यताहरु पनि छन् । असत्यमाथि सत्यको जितको प्रतिकका रुपमा मनाइने होलीको आफ्नै कथा छन् । हाम्रो राशी अनुसारको रंगसँग होली खेल्दा हामीलाई सुख समृद्धि र फलदायि हुुन्छ भन्ने मान्यता छ । यहाँ केही धार्मिक शास्त्रहरुमा उल्लेख भए अनुसार कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंग प्रयोग गरि होली खेल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ’boutमा केही जानकारी दिने कोसिस गरेका छौ । मेष वा वृश्चिक राशी मेष तथा वृश्चिक राशीको स्वामी मंगल हुन् । मंगलको रंग रातो हो र उनको पूजा पनि रातो पूजा सामाग्रीले नै हुने गर्छ । त्यसैले मेष या बृश्चिक राशी भएकाले रातो रङसँग होली खेल्नु अति लाभदायक मानिन्छ । यस राशीका मानिसलाई मान सम्मान मिल्ने तथा क्रोधको नियन्त्रण हुन्छ । भूमीलाभ हुन्छ, ऋणबाट मुक्ति मिल्छ । वृष र तुला राशी वृष र तुला राशीको स्वामी शुक्र हुन् । नवग्रह मध्ये शुक्र सबैभन्दा चम्किलो ग्रह हो । वृष र तुला राशी भएका मानिसले होलीमा सेतो रंगको कपडा लगाएर होलीमा पँहेलो र आकाशेरंगको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले बैभव प्राप्ती हुन्छ । विलासितापुर्ण जीवनको आनन्द उठाउन सक्छन् । साथीभाई र परिवारबाट सम्मान मिल्छ । मिथुन र कन्या राशी यी दुई राशीका स्वामी बुध हुन् । बुध बुद्धि एवं वाणीसँग सम्बन्धित ग्रह मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार बुध हरियो रंगको प्रतिनिधि ग्रह हो । मिथुन र कन्या राशी भएका मानिसले होलीको दिन विहानै गाईलाई हरियो घाँस खुवाउनु पर्दछ । हरियो रंगसँग होली उत्सव मनाउनु पर्छ । यसको प्रभावले व्यापार एवं जागिरमा सम्मानजक उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान पनि मिल्नेछ । कर्कट राशी कर्कट राशीको स्वामी चन्द्रमा हुन् । चन्द्रमा मन एवं धनसँग सम्बन्धित ग्रह मानिन्छ । जो पूर्णरुपमा सेतो तथा सफा हुन्छ । कर्कट राशीका मानिसहरुले सेतो फूलले शिवको पुजा गरेर पँहेलो, केशर तथा हरियो रंगसँग होली खेल्दा फलदायी हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई धन तथा सुख बृद्धि हुन्छ । हरियो रंगले शान्ति प्रदान गर्छ । सन्तानको सुख मिल्नेछ साथै समाजमा सम्मान मिल्छ । सिंह राशी सिंह राशीको स्वामी सुर्य हुन् । सुर्य सबै ग्रहको पनि स्वामी मान्छिन्छन् । …
८ चैत्र २०७२, सोमबार १५:५७	0 466
रुपैया पैसा अनि अनलाइनबाटै डाउनलोड ! सुन्दै अचम्म लाग्ने है ? तर यो सत्य हो अब भारतीय नोट अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने भएको छ । त्यो पनि आम सर्वसाधारणले । तर कसरी अनि किन ? तलको फोटो हेर्नुस, केही देख्नु भयो ? नदेख्नु भएको भए तल पढ्नुस् । घुस लिने र दिने कार्य अत्यधिक बढेपछि भारतले भ्रष्ट्राचारबिरुद्द लड्न एउटा अनौठो कदम चालेको छ । भ्रस्टाचारबिरुद्द आवाज उठाईरहेको संस्था ‘फिफ्थ पिल्लर’ ले भ्रष्ट्राचार कम गर्ने उदेश्यले बजारमा ‘शुन्य’ रुपियाँको नोट निष्काशन गरेको छ । भारतीय ५० रुपयाँ जस्तै देखिने यो नोटमा0Rupee लेखिएको छ । ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ लेखिने ठाउँमा ‘भ्रष्टाचार खतम करो’ लेखिएको छ । कसैले घुस मागेको बेला उक्त शून्य मूल्यको नोट दिन सकिने र उसलाई तुरुन्त प्रकाउ गर्न सकिने नै यो नोटको बिशेषता भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । हालसम्म यस्तो शून्य मूल्यको २५ लाख थान नोट वितरण गरिसकिएको छ । ताकी कसैले घुस मागे त्यस्तो नोट दिन सकियोस् र तुरुन्त प्रहरीले पक्राउ गर्न सकोस् । यो नोट संस्थाको वेवसाइटबाट सजिलै डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । यो नोट हिन्दी, तमिल, मलयालम, कन्नड र तेलगु गरी ५ भाषामा तयार गरिएको छ । हालसम्म यही नोटको सहयोगले भारतमा हजारौं भ्रष्टाचारीहरु पक्राउ परिसकेका छन् । नोटमा संस्थाको नाम र फोन नम्बर समेत छ । यो पढ्न छुट्यो कि ? गर्मीमा ध्यान दिनै पर्ने ७ कुरा भारतमा बन्यो बिना ड्राईभर चल्ने कार
८ चैत्र २०७२, सोमबार ११:१७	0 441
नेपालमा गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । जाडोमा भन्दा गर्मीमा बिभिन्न रोगहरुको संक्रमण बढी हुन्छ । यसका साथै गर्मी मौसममा खाना नरुच्ने र आलस्यता बढ्ने भएकाले काम गर्ने जागर घट्न सक्छ । यसका साथै टिनेज युवापुस्ताहरुले आफ्नो स्मार्ट/ब्युटी जोगाउनका लागि अलि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सानोतिनो कमजोरी र हेलचेक्राइले पनि तपाइको ब्युटीपन र स्मार्टपनमा आंच आउँ सक्छ तसर्थ यो गर्मी मौसममा यी १० कुरामा ध्यान दिन जरुरि छ । १. सनप्रुफ आइज गर्मीमा छालाको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ । गर्मीमा सूर्यको सीधा सम्पर्कमा आउँदा छाला डढ्न सक्छ । घामले डढेको छाला चमक हराएर कालो देखिन्छ । सम्भव भएसम्म १० देखि ३ बजेको घाममा बाहिर निस्कनुहुँदैन। बाहिर जानुभन्दा एक घन्टा पहिले अनुहार तथा शरीरको खुला भागमा एसपीएफ ३० युक्त सनस्त्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ । सूर्यको हानिकारक किरणबाट आँखालाई बचाउन घरबाहिर निस्कँदा युवी प्रोटेक्टिभ सनग्लास प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले आँखामा आउने रंकल अर्थात् चाउरीलाई पनि कम गर्छ । २. केशको ख्याल गर्मीमा पसिना तथा घामले केश छिट्टै मैलो हुन्छ । त्यसैले हप्तामा कम्तीमा तीन पटक स्याम्पुले केश धुनुपर्छ । सनस्त्रिमयुक्त्त कन्डिसनर प्रयोग गर्नुपर्छ । गर्मीमा कुनै पनि प्रकारको केमिकल ट्रिटमेन्ट, पम्पिङ, स्ट्रेट आदि गर्नु राम्रो मानिँदैन ’cause त्यसले केश सुख्खा हुन्छ। ३. खुट्टाको हेरचाह गर्मीमा पसिनाले खुट्टा गन्हाउने समस्या बढ्छ । यसबाट बच्न समय/समयमा खुट्टा खुल्ला राख्नुपर्छ । साथै हल्का पाउडर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी नियमित रूपमा पेडिक्योर गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ४. डाइटमा ध्यान गर्मीमा हल्का वा छिटो पच्ने खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । धेरै तेल तथा मसलायुक्त खानेकुरा खानु हुदैन। प्रशस्त मात्रामा पानी, नरिवल पानी तथा काँक्रा सेवन गर्नुपर्छ । फलफूल तथा सागसब्जी काटेपछि त्यसलाई तुरुन्त प्रयोग गर्नुपर्छ। काटेर धेरै समय राखेको सागसब्जी तथा फलफूलमा भिटामिन नष्ट हुन्छ। कुनै पनि फलफूल तथा सलाद खानुभन्दा पहिले राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ । ताजा खाना खानुपर्छ र स्वस्थ रहनुपर्छ। गर्मीमा तुरुन्त पकाएको भोजन खानुपर्छ। कारण गर्मीमा टमाटर, आलु, हरियो सागपात र दाल चाँडै खराब हुन्छन्। सुपाच्य भोजन गर्नुपर्छ, गरिष्ठ भोजनबाट टाढै रहनुपर्छ। डाइटमा सुप, सलाद र फल खानुपर्छ। मसलेदार खाना कम खानुपर्छ। एकसाथ तीनभन्दा बढी फलको मिक्स जुस पिउनु हुँदैन। डिब्बाबन्द जुसबाट जोगिनुपर्छ। ताजा फलको जुसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बिहान उठेपछि एक–डेढ घन्टाभित्र केही न केही खानुपर्छ वा ग्रीन टी सेवन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म खाली पेट रहनाले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन पुग्छ। थोरै–थोरै …
७ चैत्र २०७२, आईतवार १३:५७	0 1,387
‘संगत अनुसारको फल’ भन्ने नेपाली समाजमा एउटा भनाई नै छ । ‘चोरसँग संगत गरे चोर, सज्जनसंग संगत गरे सज्जन’ भन्ने अर्को भनाई पनि छ । भन्न खोजिएको के हो भने जो जस्तो मान्छेसंग संगत गर्यो त्यो मान्छे त्यस्तै स्वभावको हुन्छ । दैनिक जीवनयापनका क्रममा हामीले हजारौ मानिससंग संगत गर्छौ तर को सही र को गलत भन्ने ख्याल गर्दैनौ । यसले तपाइको जीवनमै असर पार्छ । संगत अल्पकालीन, दिर्घकालिन के हो त्यसलाइ ख्याल गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यदि कोहि कसैले स्वार्थका कारण आफुसंग नजिक हुदैछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट जोगिनु नै कल्याण हुन्छ । त्यसो त तपाइले अहिलेसम्म संगत गरेका मध्ये कोही लामो समयदेखि सम्बन्धमा होला कोहि हप्ता/महिनापछि नै टाढिए होलान । आखिर किन त ? यो सबै तपाइको ब्यबहार र तपाइको संगतमा आएका मानिसको स्वभाव र बानीको कारण हो । केही मानिसहरु आफ्नालागि पर्फेक्ट पार्टनर छान्ने क्रममा हमेसा चुकिरहेका छन् । सुरुमा देख्दा जस्तो देखिन्छ, वास्तविक जीवनमा ऊ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । पढ्नुस कोही मान्छेसंग नजिकिनु अघि ख्याल गर्नुपर्ने ८ कुरा । १. तपाइको एउटै अंग नजर लाउने मान्छे यस्ता व्यक्तिसँग टाढा रहनुस्, जसको नजर बारम्बार तपाईंको कुनै एउटै अंगमा परिरहेको हुन्छ । २. शरीर कन्याउने/नाक कोट्याउने मान्छे यस्ता व्यक्तिसँग बच्नुस्, जसले आँखा छलेर शरीरमा कन्याइरहन्छ । ३. पेशाको सम्मान नगर्ने मान्छे यस्तो व्यक्तिको संगत कहिल्यै नगर्नुस्, जसले वेटर, रिक्सा चालक वा यस्तै पेशा गरेर जीवन चलाउने मानिसलाई नोकरको जस्तो व्यवहार गर्छ । ४. अग्रज र अशक्तलाई मद्दत गर्न नचाहने मान्छे आफु भन्दा ठूला अग्रज र असक्तलाई सहयोग गर्न बाट भाग्ने मानिसबाट पनि टाढा बसेकै राम्रो मानिन्छ । ५. तपाइको कुरा सुन्दै नसुन्ने मान्छे यस्ता व्यक्तिसँग हमेशा टाढा रहनुस्, जो आफ्नो कुरामात्रै सुनाईरहन्छ, तपाईंलाई सुन्नै तयार हुँदैन । ६. सधै माथि पर्न खोज्ने/जिद्दी गर्ने मान्छे हमेसा आफू नै केन्द्रमा रहन खोज्ने व्यक्तिसँग टाढा रहनु नै वेश हुन्छ । ७. महिलाहरुलाई तल्लो र भान्छामै केन्द्रित गराउने मान्छे जसले महिलाहरु किचनमै सिमित रहनुपर्छ भन्ने सोच्छ । यस्ता व्यक्तिलाई छिट्टै बाई भन्न राम्रो हुन्छ ८. औलाको नङ लामो भएका मान्छे औलामा नङ पाल्नु राम्रो मानिदैन । अझ कान्छी औलामा नङ् लामो बनाउनु धेरै नराम्रो मानिन्छ । यस्तो मान्छेहरु संग पनि संगत गर्न नहुने धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख छ ।
६ चैत्र २०७२, शनिबार ११:२३	0 3,449
५ चैत्र २०७२, शुक्रबार १४:१७	0 1,022
५ चैत्र २०७२, शुक्रबार १३:०३	0 1,352
यौनका सन्दर्भमा पश्चिमेली समाजलाई खुल्ला र पूर्वीय समाजलाई संकुचित मानिन्छ । त्यसो त पछिल्लो समय पूर्वीय समाज पनि आधुनिकताका नाममा पश्चिमेली सस्कृती अबलम्बन गर्न थालेका छन् । तर यौनका मामिलामा पूर्वीय समाज पनि कम्ति खुल्ला भने छैन । यसको बिस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नभएको मात्र हो । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि सयौ बर्ष पुरानो मठ मन्दिरहरुमा थरिथरिका यौनाकृतिहरु कुदिएका छन् । अधिकांश चर्चित मन्दिरहौर्मा खुल्लमखुल्ला देखिने ठाउँमा बिभिन्न तरिकाका यौनासनहरु बनाइएका छन् । के तपाईले यी कुराहरु ख्याल गर्नु भएको छ ? यसलाई कतिपयले लुकी लुकी चिहाइरहेको हुन्छ भने कतिपय नदेखे झैँ गरेर हिड्ने गरेका छन् ।
४ चैत्र २०७२, बिहीबार ११:१०	0 385
हाँसो र खुसी नै जीवनका रंग हुन् । हास्नु, रमाउनु नै खुसि हुनु हो । यो नै जीवन जिउनुको मज्जा हो । जीवन ज्युनुको सार्थकता हो । मान्छे जति खुसीसाथ बाच्न सक्यो त्यति नै उसको आयु लामो हुन्छ । त्यसैले पनि हामी सकभर खुसी र सन्तुष्टि भएर बाच्न सिक्नु पर्छ । तर बिडम्बना, खुसी हुन् चाहदा चाहदै पनि अरुकै कारणले दु:खी बन्नुपर्ने अबस्था आइ दिन्छ । हरेक मान्छे स्वास्थ्य, सम्पन्न र खुसी हुन् चाहन्छ तर उसको परिवेश र बाताबरणले उसलाई दुखी र स्वार्थी बनाइ दिन्छ । कुनै पनि देशका नागरिक त्यो देशको बिकास र स्थिरतामा निर्भर रहन्छ । हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टले यस्तै देखाएको छ । हेर्नुस बिस्तृत रिपोर्ट
३ चैत्र २०७२, बुधबार २१:३८	0 900
३ चैत्र २०७२, बुधबार १३:३८	0 4,817
सहरमा बस्नेहरुका लागि सबैभन्दा पिरलो बन्ने गरेको छ खाना पकाउने ग्याँस । हरेक घर/घर र कोठा कोठामा ग्याँस गन्थन हुन्छ । अझ नाकाबन्दीपछि त झन् खाना पकाउने ग्याँसको हाहाकार नै मच्चियो । नाकाबन्दी खुलिसक्दा पनि खाना पकाउने ग्यास भने अझै सहज हुन् सकेको छैन । ६ महिनाद्केही नाम लेखाएकाहरुले समेत अझै ग्याँस पाउन सकिरहेका छैनन् । घरायसी प्रयोगका लागि त यस्तो अबस्था छ भने ब्यबसायिक प्रयोजनका कुरा गर्नु । ग्यास अभाव हुँदा भएको ग्यास बचत गर्न अनेक तरिकाहरु अप्नाइए । तर सही तरिका अपनाउन सक्नु भयो कि ग्यासं जोगाउने नाममा गलत तरिका अपनाउनु भयो ? यदि तपाई आफ्नो भान्छाको ग्यासलाई लामो समय टिकाउन चाहनु हुन्छ भने यी १० टिप्स ख्याल गर्नुस ।
२ चैत्र २०७२, मंगलवार १५:४९	0 1,612
नेपालको एयरपोर्टका बारेमा पटक पटक बिभिन्न आलोचनाहरु भैरहे पनि समस्या ज्युकात्यु छन् । एयरपोर्टमा हुने चोरी, भ्रष्टाचार मात्रै होइन त्यहाँ भित्रको अब्यबस्थित अबस्थाका कारण पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु वाक्क दिक्क छन् । त्यसो त केही दिन अघि सार्वजनिक एक रिपोर्टले बिश्व भरका खराब एयरपोर्टहरुको सूचीमा नेपालको एयरपोर्ट दोश्रो स्थानमा रहेको छ । हेर्नुस विश्वकै सबै भन्दा खराब १० एयरपोर्ट
२ चैत्र २०७२, मंगलवार १३:१३	0 1,915
धेरैजसोलाई कन्डमलाई उपयोगको समय प्रभावकारी हुने गरी कसरी सुरक्षित राख्ने वा त्यसको सही प्रयोग गर्ने कसरी भन्नेबारे खासै थाहा हुन्न । कन्डमको प्याकेट च्यात्नुभन्दा अघि यो पूरा टाँसिएको छ कि छैन भन्ने हेर्नपर्छ । टाँसिनुको मतलब बिगि्रनु हो । एक्स्पायरी डेट पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।' यसलाई अतिरिक्त प्रकाश, गर्मी आदिबाट जोगाउनुपर्छ । कन्डमलाइ चिसो र अँध्यारो स्थानमा राख्नुपर्छ । उपयोगभन्दा पहिले प्याकेटबाट निकाल्नुहुन्न । गर्भ रहनबाट जोगाउने मात्र होइन यौनजन्य रोगबाट समेत जोगाउछ कन्दमले । तर यसको प्रयोग गर्दा पनि कतिपयको अनिच्छित गर्भ बसेको पाइएको छ । यो प्रयोग गर्न नजान्दाको परिणाम हो । कन्दमको प्रयोग कसरी गर्ने ? अर्थात कन्डम कसरी लगाउने ?हेर्नुस यो भिडियो
२ चैत्र २०७२, मंगलवार १२:४४	0 597
१ चैत्र २०७२, सोमबार १४:१६	0 453
सामान्य ३ बर्षीय बालिकाले के गर्न सक्ला ? भर्खर नर्सरीमा पाइला टेक्ने यो उमेरमा के गर्न सक्नु र । तर कतिपय बालिकाहरु विलक्षण प्रतिभाका हुन्छ र अनौठो काम गर्न सक्छन । हामीले त्यस्तो विलक्षण प्रतिभा भएका बालिकाको कुरा पनि गरिरहेका छैनौ । केवल एक जना सानी नेपाली नानीको कुरा गरिरहेका छौ । जसले नेपाली जडीबुटीको प्रचार गरिरहेकी छिन् । यसको मतलब हामी कुनै उत्पादनको बिज्ञापन गरिरहेका छैनौ । हामीले केवल ति नानीको क्षमता प्रस्तुत गर्दै छौ । बोलि समेत राम्ररी नफुटेको यी नानीले नेपाली जडीबुटीको बिज्ञापन गरिरहेकी छिन् । "आउनुहोस, जानकारी लिनुहोस् । आदरणीय बुबा, के तपाईलाई हात दुख्ने, झमझमाउने, पिनास बाथ रोगहरु छ, यदि त्यस्तो छ भने आफ्नो नेपालीको जडिबुटीबाट बनेको....चित्त बुझे लिनुस नबुझे छोडी दिनुस तर यसको फाइदा बुझेर जानुस् .." यी नानीले बोलेका वाक्य हुन् यी । हुन् त यी नानीलाई कसैले सिकाएर/घोकेर बोलेको जस्तो देखिन्छ तर उनको हाउभाउ भने निकै रोमान्चक देखिन्छ । हेर्नुस् रमाइलो भिडियो......
यस्तो सपना देख्नु भयो भने बिपनामा धन प्राप्त हुन्छ (२० सपना)
१ चैत्र २०७२, सोमबार १२:५८	0 2,951
३० फाल्गुन २०७२, आईतवार १०:०८	0 1,134
सबैभन्दा बढी जिज्ञासा र कौतुहलताको बिषय हो- सेक्स । यसका बारेमा महिला होस् या पुरुष सबैको मनमा उत्सुकता हुन्छ । जति खायो त्यति गुलियो भने झैँ जति जान्यो त्यति नै जिज्ञासाको बिषय बन्ने गर्छ यो । तै पनि आज हामीले धेरैको जिज्ञासा मेट्ने मेट्ने कोसिस गर्दै छौ । बिश्वमा सबै भन्दा लामो यौनांग कसको होला ? सबै भन्दा ठूलो र बलियो कसको होला ? सबै भन्दा ठूलो स्तन कसको होला ? शारीरिक सम्पर्क सबै भन्दा बढी कसले गर्न सक्ला ? हस्तामैथुन सबै भन्दा बढी कसले गर्न सक्छ होला ? एक दिनमा एक महिलाले कति जनासंग सम्पर्क गर्न सक्ला ? आदि इत्यादि धेरैको जिज्ञासा बन्ने गरेको छ । यी जिज्ञासा मेटाउनका लागि पढ्नुस बिश्वमै रेकर्ड कायम भएका यी ११ रोचक तथ्यहरु जुन रोचक मात्रै होइन अचम्म पार्ने खालका छन् ।
२९ फाल्गुन २०७२, शनिबार १४:४४	0 800
२९ फाल्गुन २०७२, शनिबार १०:४५	0 998
नेपाली नेताहरुको मूल्य कति होला ? हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीदेखि पत्रकार सम्म लिलालीमा छन् । के तपाई पत्याउनु हुन्छ ? लिलामीमा राखिएका नेताहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भटराई, शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, माधब कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादब , राजेन्द्र महतो छन् । यो सानो तिनो जोक्स होइन, बिश्वको चर्चित अनलाइन शपिंङ् साइटमा नेपालका नेताहरुलाई बिक्रिमा राखिएको छ । ईबे डट कममा nabikoiral0 युजरनेम भएका एक युवाले प्रधानमन्त्री ओलीदेखि नेपालका चर्चित नेतालाई बिक्रिमा राखेका हुन् । नेताहरुको मूल्य पनि महँगो छैन जम्मा १ डलर तोकिएको छ । अनलाइनमा पत्रकार ऋषि धमला पनि बिक्रीमा छन् । ति युवाले ऋषि धमला भने फ्री अर्थात् सितैमा भएको बताएका छन् । थप पढ्नुस् ...
२८ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १७:२२	0 904
के तपाई आफ्नो फोनको ब्याट्री 'लङ् टाइम' नटिकेर हैरान हुनुहुन्छ ? उसो भए यो तपाईका लागि खुसीको खबर हुन् सक्छ । धेरैजसो स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने समस्याले गर्दा हैरानीमा हुन्छन । वास्तवमा हाम्रै स-साना गल्तीले यस्ता समस्या निम्ति रहेका हुन्छन, जुन हामीलाई थाहा हुदैन । तर बजारमा त्यस्ता स्मार्टफोन पनि छन् जसको ब्याट्री धेरै लामो समयसम्म टिक्छ । कुन कुन हुन् त सबैभन्दा धेरै ब्याट्री टिक्ने ६ स्मार्टफोनहरु ? पढ्नुहोस...
२८ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १५:४७	0 703
प्रेम, मिलन, बिछोड अनि ब्रेक अप । प्रेमिल संसारमा यी शब्दहरु पर्यायवाची हुन् । कोही मायाँमा चुर्लुम्म डुब्छन भने मायाँको जालमा फसेर तड्पिरहेका हुन्छन । यो संसारको रित नै यस्तै हो । तर स्मरणीय कुरा के हो भने मायामा धोका किन हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु भयो भने तपाईको लागि राम्रो हुन्छ । महिला पुरुष एउटै रथका दुइ पांग्रा भन्ने गरिन्छ । तर कहिलेकाही आपसी मेल नहुँदा एक अर्कालाइ धोका दिइरहेका हुन्छन । शुरुमा सामान्य रुपले दिने गरेको धोका अन्तत सम्वन्धविच्छेद सम्म पुग्दछ । कुनै पनि जोडीको सम्बन्धको जग आपसी विश्वास र बुझाईमा बस्ने गर्छ । त्यसमा किन धोका आउने गर्छ । किन एकै साथ काँधमा काँध मिलाएर हिड्नेहरु एक अर्कालाई धोका दिन पुग्छन् । यसमा केही समय अघि गरिएको एक सर्वेक्षणमा महिलाले भन्दा बढि पुरुष मित्रहरु आफ्नो महिला मित्रलाई धोका दिने गरेको पाइएको छ । आखिर किन दिन्छन त पुरुषहरुले महिलालाई धोका ? । पढ्नुस पुरुषहरुले महिलालाई धोका दिने मूख्य ५ कारण
२७ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १३:३९	0 2,461
अश्लिल फिल्म अर्थात निला चलचित्र नहेर्ने कमै होलान । पुरुष होस् अथवा महिला, पुरातन समाज होस् अथवा आधुनिक । सेक्स एउटा यस्तो बरदान हो जुन जति खायो त्यति मिठो लाग्छ, जति लुकायो त्यति उकुसमुकुस बढ्छ र जति कडाइ गरियो त्यति नै यसको क्रेज बढ्छ । हो, पछिल्लो अध्ययनले यस्तै देखाउछ । यो जैविक गुण हो न कसैले सिकाउँ पर्छ न त रोक्न नै सकिन्छ तर यसको मतलब असामाजिक तरिकाले अंगाल्न हुन्छ भन्न खोजिएको भने होइन । यौनका बिरोधि र ब्रह्मचारीहरु पनि यौनकाण्डमा मुछिनुको मुख्य कारण पनि यहि नै हो । बाहिर भन्नु/नभन्नु , देखाउनु/नदेखाउनु आफ्नो ठाउमा छ तर यौन तृष्णाबाट कोही पनि चोखिन सक्दैन । अचेल अधिकांशले स्मार्टफोनमा अस्लिल भिडियो/फोटो लुकाए/ राखेका हुन्छन । घरको सिरानीको खोल भित्र अस्लिल पुस्तक लुकाएका हुन्छन । दराजमा कपडा यौन पुस्तक लुकाएका हुन्छन । युवायुवती होस् अथवा बुढापाका नै किन नहोस जन्मेदेखि मृत्युसम्म यौन प्यासले अघाउदैन । मान्छेको जन्मदेखि नै यौनको प्यास सुरु हुन्छ । पैतालाबाट सुरु हुने यो प्यास बिभिन्न अंग हुँदै युवावस्थादेखि यौनांगमा प्रवेश गर्छ । झट्ट हेर्दा यौनांगमा मात्रै यौन प्यास र उत्तेजना हुने जस्तो लागे पनि यो सत्य होइन । यौनांगमा सर्वाधिक प्यास र सन्तुष्टि हुने गर्छ भने अन्य पैताला, खुट्टा, छाती, हात, जिब्रो, गाला, कान, मष्तिस्क लगायतका अंगहरुमा यसको स्वाद र सन्तुष्टि लुकेको हुन्छ । त्यसो त तपाइको बालबच्चाले पनि आमा बुबाको काखमा चिस्रेर यौन प्यास मेटेको हुन्छ । के तपाइले ख्याल गर्नु भएको छ ? केटीहरु र केटाहरुको मन पर्ने अश्लिलता भने फरक फरक हुन्छ । हेर्नुस यो भिडियो केटीहरु कस्तो अश्लिल फिल्म हेर्न मन पराउछन
२७ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १०:१५	0 6,019
किचकन्याको बारेमा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । बाटोघाटोदेखि कोठाको ओच्छ्यानसम्म किचकन्याले सताएको कथाहरु हामीले सुन्दै आएका छौ । पछिल्लो समय भूत प्रेतको बिश्वास घटेसंगै डर पनि घट्दै गएको छ तर पनि भूतसंग जोडिएका बिगतका कथाहरु सुन्दा जो कोहीको पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ । किनकी भूत प्रेतका कथाहरु निकै डरलाग्दा हुन्छन । सुन्नेको त रौ ठाडो हुन्छ भने भोग्नेको हालत कस्तो होला ? ग्रामिण क्षेत्रमा मात्रै होइन राजधानी काठमाडौँमा समेत किचकन्याले सताएको बिभिन्न कथाहरु छन् । कथा मात्रै होइन किचकन्यासंग प्रत्यक्ष सम्बाद गरेका भनिएका व्यक्तिहरु अझै जीवित नै छन् । उनीहरुको कथा पत्याउनु र नपत्याउनु तपाई हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सरोकार हो तर बुझेर हेर्दा कथाहरु वास्तविक निकट लाग्छन । राजधानीको पुरानो बागमती पूल थापाथली प्रसुति आसपास धेरै मानिस किचकन्याको सिकार भएको भनाइ छ । त्यस्तै काठमाडौंको टेकु भंसार्, नरदेबी ताम्सिपाखा, जयबागेश्वरी-सिफल आदि ठाउँमा किचकन्या देखिएको भेटिएको कथाहरु सुनिन्छ । हेर्नुस भिडियो ...